7 Strategies Jiri na ricnye ọnụahịa ọgụgụ isi kọwaa | Martech Zone
na IRCE, Enwere m ike ịnọdụ ala Mihir Kittur, onye nchoputa na Chief Innovation Officer na Ugam, nnukwu data nchịkọta ikpo okwu nke na-enye ụlọ ọrụ azụmahịa ike ka ha mee omume oge na-abawanye arụmọrụ ego. Ugam gosipụtara na ihe omume ahụ iji kwurịta ọnụahịa na otu ụlọ ọrụ ga-esi zere agha ọnụahịa. Site n'iji ihe omuma ahia nke ndi ahia anakọtara na ntaneti ma wuo ha n'ime usoro onu ahia nke ndi ahia, Ugam enwewo ike imeziwanye uzo nke oma site na ichota udiri na ọdịnaya ya na ego.
Lee usoro ọnụahịa 7 kọwara
Nlekọta Ọnụ Ahịa bụ usoro nke ịchọọ ọnụ ahịa ndị asọmpi iji nweta nghọta ka mma banyere ọnụahịa ndị na-ere ahịa na ahịa. A na-ejikarị ọgụgụ isi ọgụgụ isi na nlekota ọnụahịa asọmpi na-agbanwe agbanwe.
Egwuregwu Egwuregwu Mpi bụ otu etu ahịa gị nke ngwaahịa si emeghachi omume na ngbanwe ọnụahịa ndị asọmpi.
Dynamic Ịnye ọnụahịa bụ echiche nke ihe ọnụahịa dabere na ọnọdụ ahịa gbanwere. Ọ bụ omume iji chọpụta ọnụọgụ ego (n'ụzọ mmiri) dabere na ọkọnọ, ọchịchọ, ụdị ndị ahịa na / ma ọ bụ ihe ndị ọzọ, dị ka ihu igwe.
Ahịa ọgụgụ isi bụ omume nke inweta nghọta ka mma banyere ọnọdụ ọnụahịa gị n'ahịa ma e jiri ya tụnyere asọmpi gị. Ọ na-enye ndị na-ere ahịa aka ịmara banyere ọnụ ahịa ọnụahịa ahịa ma nwee nghọta na nghọta banyere mmetụta ha na azụmaahịa a.
Ọnụahịa Optimization bụ ngwa nke nchịkọta nke na-ebu amụma omume ndị ahịa na ọkwa micro-market ma gosipụta nnweta ngwaahịa yana ọnụahịa iji bulie uto ego. Ebumnuche bụ isi bụ ire ngwaahịa ziri ezi nye onye ahịa kwesịrị ekwesị n'oge kwesịrị ekwesị maka ọnụahịa ziri ezi.
Iwu-Dabere nye ọnụahịa bụ usoro nke ekenye ọnụahịa ngwaahịa dabere na iwu / usoro. Usoro a na - enyere aka itinye ngbanwe ọnụahịa n'otu ntabi anya ma na - ebelata mmezi ọnụego. Dynamic Ịnye ọnụahịa na-emejuputa atumatu site Iwu-Dabere ricnye ọnụahịa (ie, "Ọ bụrụ na osompi si price adalata ka X, anyị price na-aga Y," "Ọ bụrụ na a ngwaahịa bụ ala na yiri nkata, bulie price ka Z.")
Smart Dynamic ịnye ọnụahịa is Dynamic Ịnye ọnụahịa nwere ọkwa ndị ọzọ nke ọgụgụ isi ndị ahịa na ihe ndị dị na mgbaàmà mmekọrịta (dịka, nyocha ngwaahịa, Facebook masịrị, Twitter kwuru, wdg.)
Nwere ike ịgụ ihe niile gbasara ịnye ọnụahịa ọgụgụ isi (ebe m nwetara nkọwa ndị a) n'ime Ọnụ ọgụgụ ọgụgụ isi nke Ugam eBook, n'efu maka nbudata.
Ugam's Ọnụ ọgụgụ isi na njikarịcha azịza ya bụ azịza nke SaaS nke na-achịkọta ma jikọta data asọmpi oge, akara ngosi e-achọ, data azụmahịa, data ndị na-ere ahịa, na data ndị ọzọ iji ghọta ihe onye ahịa dị njikere ịkwụ, na ọnụ ahịa dị mma n'oge.
Tags: Egwuregwu Egwuregwu MpiNlekọta Ọnụ AhịaebookirceMihir KitturAhịa ọgụgụ isiỌnụahịa Optimizationịnye ọnụahịaịnye ọnụahịa ọgụgụ isiIwu-Dabere nye ọnụahịaSmart Dynamic ịnye ọnụahịaugam ngwọta
Nzube na-azaghachi na Ebe Ntugharị Nchọgharị Mobile
Nhazi ihe mejuputara otutu foto